बिनोद रानाभाटलाई ८२ लाख उठेपछि शिशिर भण्डारीलाई यति ठुलो सम्मान ! देशको इज्जत राखे भन्दै यस्तो गरियो (भिडियो हेर्नुस) – दैनिक नेपाल न्युज
बिनोद रानाभाटलाई ८२ लाख उठेपछि शिशिर भण्डारीलाई यति ठुलो सम्मान ! देशको इज्जत राखे भन्दै यस्तो गरियो (भिडियो हेर्नुस)
समाजसेवी तथा गरिब दुखीको हिरो शिशिर भण्डारीले भर्खरै मात्र बिनोद रानाभाटको अभियान सम्पन्न गरे ,। उक्त अभियानमा ८२ लाख तिर्नुपर्नेमा शिशिरले मात्र १९ लाख ५० हजार सँकलन गरेका थिए । यसैबिच शिशिरलाई हेटौंडामा सम्मान गरिएको छ । यस बिषयमा शिशिरले लेखेका छन् – दुई युवा भाईहरु अँकित भुषाल र युवराज चौलागाईले हेटौंडामा आयोजना गर्नु भएको “मिस हेटौंडा युनिभर्सल- २०१९” मा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी हुन शनिबार हेटौंडा पुगेको थिएँ । भव्य र सभ्य कार्यक्रमका बिच प्रतिस्पर्धी ११ हेटौंडाका चेलीहरुले सडक सडक र पसल पसलबाट सँकलन गर्नु भएको १५ हजार सहयोग रकम हामीलाई हस्तान्तरण गर्नु भयो ।
उक्त सहयोग रकम हामी गोपी मिजारलाई बुझाउँनेछौं । सामाजिक उद्येश्यका साथ गरिएको यो सौन्दर्य प्रतियोगितासँग आवद्ध सबैलाई सम्मान छ । मिस हेटौंडा युनिभर्सलमा उत्कृष्ट हुनु भएकी हेटौंडाकी चेली सुरक्षा जि.सीलाई हामीले हाम्रो आउँदै गरेको म्युजिक भिडियोमा अभिनयको मौका पनि दिदैछौं । प्रतिस्पर्धी सबैलाई उज्वल भविष्यको कामना । शिशिरले यस पुर्व आफ्नो गीत हाम्रो माया जिन्दावादबाट टिकटकमा हिट भएका प्रिज्मा र प्रिन्सी खतिवडा जुम्ल्याहा दिदी बहिनीलाई डेव्यु गराएका थिए । भिडियो हेर्नुस…
हलेसी मन्दिरको भेटी साढे सतासी लाख
काठमाडौंमै घरधनिले घर भाडामा बस्ने पद्मालाई यस्तो घिनलाग्दो काम गरे, हेर्नुस् भिडियो